Umatshini wokuTya izilwanyana
15-20T / D Umatshini wokutyisa izilwanyana
50T / D Umatshini wokutyisa izilwanyana
6-10T / D Umatshini wokutyisa izilwanyana
Umatshini wokomisa inqaba
Iinkozo zoGcino lweeNkozo
I-100T yeSilo yokuGcina
200T yeSilo yokuGcina
I-500T yeSilo yokuGcina
I-1000T yeSilo yokuGcina
2000T yeSilo yokuGcina
I-5000T yeSilo yokuGcina
7T / D Umbona Mill Machine
12T / D Umbona Mill Machine
20T / D Umbona Mill Machine
30T / D Umbona Mill Machine
50T / D Umbona Mill Machine
70T / D Umbona Mill Machine
100T / D Umbona Mill Machine
1-10kg Semi-Auto Ukupakisha Machine
1-5kg Semi-Auto Ukupakisha Machine
10-20kg Semi-Auto Ukupakisha Machine
25-50kg Semi-Auto Ukupakisha Machine
Iphepha leebhegi zokwenza umatshini
5T / D Ingqolowa Flour Mill
10T / D Ingqolowa Flour Mill
15T / D Ingqolowa Flour Mill
20T / D Ingqolowa Flour Mill
30T / D Ingqolowa Flour Mill
40T / D Ingqolowa Flour Mill
50T / D Ingqolowa Flour Mill
100T / D Ingqolowa Flour Mill
Umatshini wokugaya umbona weTeyile
Umbona Milling Machine, nto leyo yiprojekthi kunye nophuhliso lomntu, umgubo wombona kuphakamisa abantu bazise izibonelelo. Umbona Flour Machine uphuhliso olukhawulezayo kumazwe ezolimo ziphuhlisiwe, thina ukuvelisa umbona wokugaya umatshini phantse iminyaka eli-10 ukususela ngo-2008 uluntu ngoku hi ...
Ungasenza njani isiCwangciso soShishino seMigubo elungileyo kwimveliso yempuphu
Oomatshini bokugaya umgubo ophuhle kakuhle bazise utshintsho kwizityalo zokugaya umgubo, kwimakethi yomgubo wase China. Isityalo esikhulu sokugaya umgubo kubonakala ngathi sithathe indawo enkulu, kwaye ayisiyiyo nje ngenxa yemveliso ephezulu, banobunzima ngakumbi ...
Umatshini wokugaya wangoku ngokukodwa, kwaye ngokufanelekileyo, uyilelwe ukukhupha umgubo omhlophe kangangoko kunokwenzeka kwingqolowa nganye
Ukugaya ngokwesintu kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthembeka, umgangatho, incasa kunye nexabiso lesondlo lomgubo. Kungenxa yokuba ukutya okuziinkozo kugqunyelelwe kube kanye kuphindwe phakathi kwamatye okusila angqingqwa, angqukuva, okugcina nokudibanisa ioyile yentsholongwane yengqolowa. Le nkqubo elula ikwi-hea ...
sihlala sibambe inzondelelo kunye nokuzimisela ukukunceda ukuba uqale ishishini lakho lokugaya umgubo ngokuba ngumgubo wombona okanye wokugaya umgubo wengqolowa
Njengenye yezinto ezikhulayo ngokukhawuleza kwezoqoqosho, iAfrika idlala indima ebaluleke ngakumbi kwihlabathi. Njengamanye amazwe, ezolimo zibaluleke kakhulu kwisizwe, akukho kwahluka e-Afrika, ngaphezulu, ezolimo zibaluleke kakhulu kumazwe amaninzi ase-Afrika. Ukanti ...
Imizi yombona kunye nemingqusho yomgubo wengqolowa ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeendlela ezilungileyo zokuphila kakuhle kwaye unegalelo eKenya
Ngelixa imveliso yezolimo inqabile, kodwa inani labantu baseKenya liyakhula. Oku kubangela imiceli mngeni ebalulekileyo ekunikezelweni kokutya elizweni, uninzi lwabantu lufumana uncedo lokutya minyaka le. Ukwenza igalelo kushishino lokutya ayisiyondlela nje yokutshintsha ubomi bakho kodwa isenzo sokuziphatha ukuze ...
Ukusebenza Umgaqo Of Flour Milling Machine
Umatshini wokugaya umatshini ojikelezayo usebenzisa ukuhlelwa kweenkozo. Ineyunq ...
Ukulungiswa kweenkozo yinkqubo yokususa ubumdaka, ukulungisa ukufuma, ukujija, ukuchuba kunye nokusila izinto eziziinkozo kwiimveliso zokhozo okanye zomgubo ngokwemigangatho yemigangatho eyahlukeneyo. Iinkozo ezicoliweyo, ezifana nomgubo werayisi, umgubo wengqolowa, umgubo wengqolowa kunye ...
21F, Ukwakha A, XinKe International Plaza, Isithili Yuhua, ShiJiaZhuang, China.